မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ အထိ ရှိလာရန် လျာထားဟု ကမ္ဘာဘဏ်မှ ထုတ်ပြန် ပြောဆို - Xinhua News Agency
ရန်ကုန် ၊ ဇူလိုင် ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ လေ့လာ ထုတ်ပြန် လိုက်သော ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်၂၀၁၅-၂၀၁၇ အရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးမြုှပ်နှံမှုသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ အထိ ရှိလာရန် လျာထား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ် (မြန်မာ) မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ပြည်သူအားလုံး ပါဝင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး၊ လူတိုင်း၏ ဘဝ အရည်အသွေးများ မြှင့်တင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် ကဏ္ဍတွင် လူဦးရေ ၂ သိန်းသည် ငွေကြေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမို တိုးတက် ရရှိကြမည့်အပြင် လူဦးရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် တယ်လီဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိလာမည်ဟု ဆိုသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို လျှော့ချပြီး ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီး ပေးနိုင်သည့် အားလုံး ပါဝင်သော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် အားကောင်းသည့် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး ကဏ္ဍတစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် ရည်မှန်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကဏ္ဍတွင် လူဦးရေ ၃ . ၅ သန်းအတွက် လျှပ်စစ်လိုင်း အသစ်များ သွယ်တန်း ဆက်သွယ်လာနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုမှု တိုးတက်လာမည်။ လူဦးရေ ၂ . ၅ သန်းအတွက် ကောင်းမွန်သည့် ကျေးလက် အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြေခံကျသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုရရှိ လာမည်။ မြေဧရိယာ ဟက်တာ ၁ သောင်း အတွက် ဆည်မြောင်း စနစ်များ ပိုမို ကောင်းမွန် လာမည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၇၆ ရာခိုင်နူန်းသည် ကျေးလက် ဒေသများတွင် နေထိုင်လျက် ရှိကြသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရန်နှင့် သာယာ ဝပြောမှုများ မျှဝေရေး မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ရန်နှင့် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများနှင့် ဈေးကွက်များသို့ပိုမို ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
လူသား အရင်းအမြစ် ကဏ္ဍတွင် ကျွမ်းကျင်သည့် သားဖွား ဆရာမများ၏ အကူအညီဖြင့် မီးဖွားသည့် ကလေးငယ် အရေအတွက်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၇၅ ရာခိုင်နူန်း အထိ တိုးတက်လာမည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ၃ သန်းနှင့် ကလေးငယ်များသည် ကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတတ်ရရှိကြမည်။ ကျောင်းသား ၃၀,၀၀၀ ကျောင်း ဆက်လက် တတ်ရောက်နိုင်ရန် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိကြမည်။ ၎င်းတို့အနက် အနည်းဆုံး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် မိန်းကလေးများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်သူများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် လူသား အရင်းအမြစ်နှင့် အားကောင်းသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရင်းနှီး မြုပ်နှံခြင်းအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အုပ်စုသည် ပြည်သူများအတွက် တိုးတက်သည့် အနာဂတ်ဘဝကို တည်ဆောက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်မည့် အခြေခံကျသည့် လူမှုရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုရရှိစေရန် လည်းကောင်း ၊ အရည်အသွေး တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းနှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ပဋိပက္ခ အခြေအနေ ၊ ကျား မ တန်းတူ ညီမျှရေး ၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစား ဆောင်ရွက်မည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
မြန်မာနိုင်ငံမှ လူသုံးအများဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် အရောင်း အဝယ်နှင့် ကြော်ငြာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ ပါဝင်လာ